Asa soa ataon’ i Voahangy Rajaonarimampianina : Betsaka ny tsy mahazaka ny fahombiazany -
AccueilRaharaham-pirenenaAsa soa ataon’ i Voahangy Rajaonarimampianina : Betsaka ny tsy mahazaka ny fahombiazany
04/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Lasibatry ny fanaratsiana indray ny vadin’ny filoham-pirenena ankatok’izao fanamarihana ny andron’ny 8 Marsa izao. Rehefa halalinina ilay fanaratsiana, dia mihodinkodina teo amin’ilay “vava be” navoakan-dRavalomanana Marc momba ny tany etsy Antanimbarinandriana.
Hotokanana amin’ny 8 Marsa , izay andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy ilay tranom-boky vaovao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena natolotry ny vadin’ny filoham-pirenena ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina ho an’ireo mpianatra sy zanaka malagasy, etsy anivon’ny tokontanin’ny Epp Antanimbarinandriana.
Iray amin’ireo asa sosialy marobe notanterahin’ ny vadin’ny filoham-pirenena io tranomboky vaovao ho an’ny ankizy mpianatra io. Zanaka malagasy maro no hahazo tombony amin’izany. Ny fanabeazana no harena, ary nisafidy nanolotra harena ho an’ny mpianatra malagasy ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina, nanolotra an’io tranomboky hanovozam-pahendrena sy fahaizana io.
Tsy zakan’ny ekipan-dRavalomanana Marc anefa izay fahombiazan’ny asa sosialy tarihin’ny Vadin’ny filoham-pirenena izay. Fanaratsiana azy indray anefa no voizina ho setrin’izany. Nambaran’ny gazety an-tsoratra iray ohatra fa “ maka vola amina minisitra hono ny vadin’ny filoham-pirenena, hikarakarany ny fandraisana an’io andron’ny 08 Marsa io”. Efa manana teti-bola manokana hanatanterahana izany fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy izany anefa ny mpikarakara, ka izay no tsy mampitomboana an’io “tsaho” voalaza an-gazety io. Hita miharihary koa fa fanaratsiana ranofotsiny.
Tena mazava be araka izany ny tanjon’ilay fanaratsiana. Tsy misy afa-tsy ny fandotoana ny anaran’ny vadin’ny filoham-pirenena fotsiny, ankatok’izao fanamarihana ny andron’ny 8 Marsa izao. Raha ny fombafomba maneran-tany mantsy, dia ny vadin’ny filoham-pirenena no mitarika izany amin’ny fomba ofisily. Tsy tantin’ny ekipan-dRavalomanana indray ve ny hahita ny fahombiazan’ny vadin’ny filoham-pirenena hitondra avo ny hasin’ny andron’ny vehivavy amin’io datin’ny 8 Marsa io ka fanaratsiana avy hatrany no valin-kafatra ? Mbola vao mainka tsy tantiny koa ny fandrenesana fa amin’io andro io ( 8 Marsa) no hitokanana an’ilay “bibliothèque” etsy Antanimbarinandriana.
Tsy tongatonga ho azy iny fivoizana fanaratsiana ny vadin’ny filoham-pirenena iny. Nialohan’iny dia efa nanakiana fanindroany an’io toerana nanaovana tranomboky etsy Antanimbarinandriana io Ravalomanana Marc. Tokony ho ny vadiny hono ( Lalao Ravalomanana) no mandidy sy manapaka eo amin’io toerana io, ka raha ny sitrapony dia tsy asiana an’izany tranomboky izany eo, fa toerana hafa mety hampidi-bola. Loza mihitsy rehefa matim-bola e ! Mampiteniteny foana sy mampanita-tsaina ka tonga hatrany amin’ny fanaratsiana olona anaty haino aman-jery.
Nanomboka omaly hatramin’ny anio, eny amin’ny Centre de Conférence Internatonale Ivato (CCI), ny fivoriambe faha-42-n’ny Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones na ny CPCCAF. Fivoriambe iraisan’ireo Antenimieran’ny varotra sy ny indostria avy amin’ireo ...Tohiny